Vaovao - Sina no mpamatsy vola vahiny mivantana (FDI) lehibe indrindra manerantany tamin'ny taona 2020
Sina no mpamatsy vola vahiny mivantana (FDI) lehibe indrindra eran-tany tamin'ny taona 2020, satria nitombo 4 isan-jato ny $ 163 miliara, narahin'i Etazonia, hoy ny tatitra nataon'ny Fihaonambe mikambana momba ny varotra sy ny fampandrosoana (UNCTAD).
Ny fihenan'ny FDI dia nifantoka tany amin'ny firenena mandroso, izay nidina ny 69 isan-jato hatramin'ny $ 229 miliara.
Ny fikorianana nankany Amerika Avaratra dia nitontongana 46 isan-jato ka lasa $ 166 miliara, niaraka tamin'ny fidirana an-tsokosoko sy ny fividianana (M&A) nidina 43 isan-jato.
Etazonia dia nanoratra ny fihenan'ny 49 isan-jato tao amin'ny FDI tamin'ny taona 2020, ary nitentina $ 134 miliara.
Nihena ihany koa ny fampiasam-bola tany Eropa. Ny fikorianan'ny onja dia nidina tamin'ny ampahatelon'ny $ 110 miliara.
Na dia nihena 12 isan-jato hatramin'ny $ 616 miliara dolara aza ny FDI tamin'ny fivelarana ara-toekarena, dia 72 isan-jaton'ny FDI manerantany no noheverina ho anjarany avo indrindra amin'ny firaketana.
Raha ny firenena an-dàlam-pandrosoana any Asia dia nahavita vondrona iray nahomby, nahatratra 476 miliara dolara tao amin'ny FDI tamin'ny 2020, ny fikorianan'ny mpikambana ao amin'ny Association of the South Asian Nations (ASEAN) 31% ka hatramin'ny $ 107 miliara.
Na eo aza ny vinavinan'ny toekarena manerantany amin'ny laoniny amin'ny 2021, manantena ny UNCTAD fa hihena hatrany ny fikorianan'ny FDI rehefa mitohy ny areti-mandringana.
Ny harinkarenan'i Shina dia nitombo 2,3 isan-jato tamin'ny taona 2020, miaraka amina tanjona kendrena toekarena lehibe hahatratrarana vokatra tsara kokoa noho ny nandrasana, hoy ny birao nasionalin'ny statistika ny alatsinainy teo.
Ny harin-karena faobe isan-taona an'ny firenena dia tonga tamin'ny 101,59 trillion yuan ($ 15,68 trillion) tamin'ny taona 2020, nihoatra ny 100 trillion yuan threshold, hoy ny NBS.
Ny fivoahan'ny orinasa indostrialy manana fidiram-bola isan-taona mihoatra ny 20 tapitrisa yuan dia nitombo 2,8 isan-jato isan-taona tamin'ny taona 2020 ary 7,3 isan-jato tamin'ny Desambra.
Ny fitomboan'ny varotra antsinjarany dia niditra 3,9 isan-jato ratsy isan-taona tamin'ny taon-dasa, fa ny fitomboana dia nahatratra 4,6 isan-jato tsara tamin'ny Desambra.
Ny firenena dia nanoratra fitomboana 2,9-isan-jato amin'ny fampiasam-bola raikitra amin'ny 2020.
Ny tahan'ny tsy fananan'asa an-tanàn-dehibe nanaovana fanadihadiana dia 5.2 isan-jato tamin'ny Desambra ary 5,6 isan-jato teo ho eo tao anatin'ny taona iray.